Maitiro ekugadzirisa bhatani repamba reiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus | IPhone nhau
Kunyangwe ini pachangu ndisina kumbobvira ndaita dambudziko nazvo, ndinoziva kuti vazhinji vashandisi vakasangana nedambudziko risinganzwisisike nebhatani repamba kana musha yeiyo iPhone. Kuva bhatani remuchina iyo yatinoshandisa mazana enguva pazuva, zvinowanzoitika kukundikana pane zvimwe zvese zvezvinhu zveimwe iPhone. Kana izvo zvaive kusvika iyo iPhone 6s, kubvira iyo iPhone 7 bhatani repamba haichisiri sags uye dzidziso hazvichagone kuputswa nekuneta.
Zvino, patinoshandisa iPhone 7 kana iPhone 7 Plus, imwe nyowani yakawedzerwa pane zvese zvekutanga zvigadziriso zvataifanira kutoita: sarudza yekudzvanya maitiro yebhatani idzva repamba. Iko hakuna chakavanzika pane ino seti: isu takabaya imwe yedenderedzwa iri pakati uye kuyedza kuti zvinonzwa sei kudzvanya bhatani repamba. Asi ko kana isu tangogadzira zvese zvatinozvidemba uye tichida kushandisa imwe yesarudzo mbiri? Mune ino posvo isu ticha tsanangura kwauri.
Gadzira iyo bhatani idzva repamba
Kana isu tichida kugadzirisa zvakare bhatani musha, isu tichazongofanira kutora kufamba zvishoma kuburikidza neyakaiswa iyo iPhone. Tichazviita nekutevera matanho aya:
Isu tinovhura maSystem uye ticha General.
Mukati General tine sarudzo nyowani inonzi Start bhatani. Tinopinda.
Sezvatakambotaura kare, tiri kurovera mudenderedzwa uye tichitarisa kuti ndeupi vibration watinonyanya kufarira.
Chekupedzisira, kana tichiziva sarudzo yedu, tinoisiya ichisarudzwa uye tinya OK.
Kunyangwe kumisikidzwa kuri kwega, inofanirwa kutariswa kuti kudedera kunoshandisa simba, ndokuti sarudzo nhamba 3 ichadya bhatiri rakawanda kupfuura mamwe maviri, nepo iyo 1 ichidya zvishoma asi isinganzwe senge yakanaka. Kwandiri, yakanyanya kunaka sarudzo ndeye yechipiri nekuti inochengetedza iyo balance pakati pekushandisa uye nekunzwa. Ndeapi magadzirirwo aunofarira kupfuura matatu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzirisa bhatani repamba reiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus
Ini ndinogara na1.
Ini ndinayo yenhamba yechipiri sezvo ini pandakagadzirisa iyo iPhone kekutanga nguva pandinoda iyo nyowani bhatani repamba kwandiri ipasure nemoyo wese
Pasina mubvunzo iyo 1 uye kwete nekuda kwesimba rekushandisa ...
Icho chimwe chezvinhu zvandinofarira zvakanyanya nezve iyo iPhone 7